(2326) Yonwabele iSapporo yasebusika! Kufuphi neSusukino
Hamba ujikeleze iSusukino! Eyona nto ingcono kwi-4 pax!
Indlu ecocekileyo, enefenitshala epheleleyo!
-Ifumaneka kwindawo yaseSusukino eSapporo.
-6 imiz ukuhamba ukusuka kwindawo yokumisa ibhasi kwisikhululo seenqwelomoya.
-Imizuzu emi-6 ukuhamba ukusuka kwisikhululo sikaloliwe saseHosui Susukino.
(Ukuba unomthwalo omninzi, kungathatha ixesha elingakumbi.)
-7-Eleven kunye neFamilyMart zikufuphi.
-I-Wi-Fi yaMahala engenamda!
-Ungakonwabela ukupheka ngezixhobo zokupheka ezisisiseko.
-Kukho iivenkile ezithengisa ukutya, iivenkile zokutya, iivenkile zamachiza, iibhari kunye neendawo zokutyela ezikufutshane.
Esi sibonelelo sokuhlala sisebenzisa iimpahla zokulala ezicocekileyo nezifakwe iintsholongwane kwinkonzo yokubonelela ngelinen.
Iphedi yesitshixo sombane emnyango kunye nokutshintsha ukukhanya phakathi kwezinye izinto zibulawa iintsholongwane ngotywala. Kwakhona siqinisekisa ngalo lonke ixesha ukuba abasebenzi bam banenkxalabo yezempilo okanye hayi kwaye bacoca igumbi ngeeglavu zeplastiki ezilahlwayo.
Akukho zingxelo zosulelo kwiindwendwe eziye zahlala ukuza kuthi ga ngoku.
Ngokungafaniyo neehotele eziqhelekileyo, abantu abaninzi abangachazwanga abayi kusebenzisa indawo yethu yokuhlala ukuze uzive ukhuselekile.
Isakhiwo sekhonkrithi esomeleziweyo
Isakhiwo esinemigangatho elishumi
Igumbi kumgangatho we-6.
Igumbi lokulala eli-1 39.9㎡
Umthamo: Iindwendwe ezi-6
Abantwana abaneminyaka eyi-6 nangaphantsi basimahla kwindlu yam.
※Kwabo bantwana, iitawuli kunye nezinto zokulala aziyi kubonelelwa, ke zizise wedwa.
Ukuba awufuni ukulungiselela ngokwakho, babale njengabantu abadala kwaye uhlawule xa ubeka indawo.
** Ukufikelela kwiindawo eSapporo ngeenyawo **
Ukuya eHosui Susukino Subway Station (esona sikhululo sikufutshane): 7mins.
Ukulungiselela iivenkile: 1 min.
Kwiivenkile zegrosari: 7 imiz.
Ukuya eTanuki-koji Arcade: 15 mins.
Ukuya kwindawo yaseSusukino: 7 imiz.
Ukuya kwiMarike yaseNijo: 12 imiz.
Ukuya kwisikhululo saseSapporo: 30 min ukuhamba, 6 imizuzu ngololiwe ohamba ngaphantsi komhlaba.
Ukuya e-Odori Park: 19 min ukuhamba, i-15 mins nge-subway.
Ukuya kwiTV Tower: 21 min ukuhambahamba, 15 imizuzu ngololiwe ohamba ngaphantsi komhlaba.
Ukuya eMt. Moiwa (ikhethwe njengeembono eziphezulu ezi-3 zobusuku eSapporo!) 40 imiz nge-subway & streetcar
Ukuya eSapporo Dome : 10 imiz ngomgaqo ongaphantsi
Akukho ndawo yokupaka yasimahla.
Ukuba ufuna indawo yokupaka, nceda usebenzise ingqekembe yokupaka esetyenziswayo ekufutshane. (Ngeendleko zondwendwe)
※ Awuvumelekanga ukuba ungene phambi kwentsimbi yesithathu emva kwemini,
kodwa ungawuyeka umthwalo wakho emva kwentsimbi yeshumi elinanye kusasa
NGEMVUME YAM kwaye ubuye uzojonga nanini na emva ko-3pm.
※ Ukucoca indlu kuya kuqala ngo-10 ekuseni.
Ibhedi ephindwe kabini × 2 (195cm × 140cm) (Igumbi lokulala)
Iseti ye-Futon × 2 (umatrasi wobungakanani obunye kunye nomthuthuzeli)
*Igumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala*
Isilungisi somoya (Ukupholisa : Igumbi lokuhlala)
Iheater (Igumbi lokuhlala)
Iadaptha ezininzi zeUniversal (100V)
Umphezulu wokuphekela igesi (izitshisi ezi-2)
Iindidi ezi-2 zeepleyiti zomntu ngamnye
Imela yasekhitshini (emva kocango lwekhabhathi yesinki yekhitshi)
I-Ladle / i-spatula / i-Tongs / i-Kitchen scissors
※ Akukho zinongo
*Igumbi lokuhlambela okanye indlu yangasese*
I-shampoo / i-Conditioner / Ukuhlamba umzimba
Umatshini wokuhlamba (Akukho msebenzi wokomisa)/Isixhobo sokucoca
Itawuli yobuso/itawuli yokuhlamba (iseti enye/ lundwendwe ngalunye)
Indlu yangasese kunye negumbi lokuhlambela zohluliwe.
Ishawa / ibhafu
Impahla yokumisa i-rack
Ikhithi yokuthunga encinci
Umtshayelo / iDustpan
*Ukuba uhlala ngaphezulu kweeveki ezi-2, nceda uthenge izinto ezityiwayo ngokwakho xa ziphelile endizilungiselele kwangaphambili.
☆Le ndlu ilawulwa phantsi kwemvume karhulumente waseJapan. Yindawo yokuhlala eqhutywa ngokusemthethweni.
Ngokomthetho waseJapan, kufuneka ndicele zonke iindwendwe zam ukuba zingenise ifomu yokubhalisa.
* Kubahambi bamazwe angaphandle, nceda ungenise ifoto yepaspoti kwifomu yokubhalisa kunye. (※Iphepha elibonisa ngokucacileyo umfanekiso wobuso, igama, inombolo yepasi kunye nomhla wokuphelelwa kodwa andifuni nombolo yobuqu.)
Kwaye emva kokuba ungenile, undwendwe ngalunye kufuneka luzithathele umfanekiso walo osegumbini kwaye lundithumelele i-app ka-Airbnb ukuze ndiqinisekise isazisi.
Ulwazi lwakho lobuqu, ngokuqinisekileyo, luyimfihlo kwaye andizukulusebenzisela naziphi na ezinye iinjongo.
Ukuba andiyilandeli imigaqo, ndiza kufumana izohlwayo kwaye kufuneka ndivale uluhlu lwam.
Ukuqonda kunye nentsebenziswano yakho ixatyiswa ngokwenene.
☆ Iivenkile eziluncedo, 7-11 kunye neFamily Mart kufutshane
☆10-imizuzu yokuhamba ukusuka kwindawo yaseSusukino
☆ Iindawo zokutyela, i-Izakaya, iivenkile zaseRamen, iibhari, iivenkile eziluncedo kunye nevenkile enkulu zikumgama wokuhamba.
Kuthatha kuphela i-30 min ukuba isondele.
Iindawo ezininzi zinokufikelelwa kwisithuba seyure.
Ngexesha lonyaka: Ukusuka phakathi kuDec ukuya embindini ka-Epreli
Kuxhomekeke kubungakanani bekhephu
Indawo yekhephu yeFu
Ndiza kukunceda kangangoko ndinako. Nceda undithumelele umyalezo ngentambo yomyalezo we-airbnb : ) Mna, usapho lwam kunye nomncedisi wam siya kukhathalela umyalezo wakho!
Inombolo yomthetho: M010021978
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chūō-ku, Sapporo